အလွဲသုံးစား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများ ပြန်မပေးလျှင် ၀န်ကြီးဌာနများ တရားစွဲခံရမည် | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| November 15, 2012 | Hits:6,080
9 | | ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
12 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website pps12345 November 15, 2012 - 10:39 pm	စာရင်းစစ် မှတ်တမ်းသာ ဖြစ်သဖြင့် ပစ်စလက်ခတ် စားသော ဌာနများသာပါဝင်ပါမည်။ စနစ်တကျ စားသော ဌာနများ မပါဝင်နိုင်ပါ။
ဝန်ကြီးဌာန များသည် မိမိကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲ၊မိမိကိုယ်တိုင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ကြိုတင်တွက်ချက်၊ မိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်၊ ကိုယ်တိုင်လက်ခံယူ ကာ ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းများတွင် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို ပိုမို သုံးစွဲတတ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ဥပမာ တံတားတစ်စင်းဆောက်မည်ဆိုပါက မြေကျင်း ဘယ်နှစ်ကျင်း၊ ဘိလပ်မြေအိပ် ဘယ်နှစ်အိပ်၊ သံချောင်းဘယ်နှစ်တန် စသည့်ကုန် ကျစရိတ်များကို လိုသည်ထက်ပိုတွက်ထားကြပါသည်။ အချို့ဆောက်လုပ်ရေး သုံးပစ္စည်းများ ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းခွင်သို့မရောက်ပဲ သိုလှောင်ရုံများ မှ တစ်ဆင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိသွားတတ်ပါသည်။ မြေကြီးလုပ်ငန်းများတွင် လည်း အမှန်တကယ် ဖို့သောမြေကြီးနှင့် တွက်ချက်ထားသောမြေကျင်း အရေအတွက် သည်များစွာကွာနေတတ်ပါသည်။ မြေကြီးများသယ်ဆောင်ရသော အကွာအဝေးများကို လည်း ပကတိ အခြေအနေထက် များစွာပိုမို တွက်ချက်ထားလေ့ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သို over estimation များကြောင့် ဒီဇယ်ဆီ များ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မရောက်ပဲ ပြင်ပဈေးကွက်ထဲ သို့ရောက်သွားပါသည်။ ပြည်ပဝယ်ပစ္စည်းများကို open tender မခေါ်ပဲ မိမိနှစ်သက်ရာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အမြတ်အစွန်းပိုမိုရရှိစေရန် ၎င်းပိုင် လုပ်ငန်းအမည် ၃ ခုဖြင့် တင်ဒါ အတုများ ဖန်တီးကာ တိုင်းပြည်ပိုင်ငွေကြေးများကို ရိုက်ထုတ် သွားသော ဓလေ့မှာ လည်း မြန်မာပြည် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဓလေ့ တစ်ခု အနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
စက်မှုဇုန်မြေ ကအစ နီးစပ်ရာသို့ချပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို လူတစ်ဦးထဲ လက်ထဲ သို့ ချပေးခြင်း တို့ကို ဝန်ကြီးဌာန များက လုပ်တတ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဝန်ထမ်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ တစ်မျိုးမှ အောက်ခြေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးကာ အောက်ခြေမှ ကန်တော့တာကို လက်ခံသော ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ အောက်ခြေ မှကန်တော့သည်ကို လက်မခံ မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှ မိမိနှစ်သက်သော လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ကိုသာအခွင့်အရေး များကိုပုံပေးကာ ထိုလူထံမှ အမြတ်ရှယ်ယာယူ တတ်သော ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဒုတိယ အမျိုးအစားဝန်ထမ်းများ ပိုမိုများပြားလာသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
အထက်ပါ အချက်များကို လက်ရှိ အစိုးရ အနေဖြင့် ပြုပြင်နိုင်မှသာ တိုင်းပြည် တိုးတက်နိုင်ပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
Reply	James Numan November 16, 2012 - 3:00 pm	စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မှာ ၀ယ်ယူရေးလုပ်တာတွေ၊ တင်ဒါခေါ်တာတွေလဲ လက်သိပ်ထိုးလုပ်နေတာပါပဲ။ တင်ဒါခေါ်ရင် ဈေးပိုပေးတာတောင် လက်မခံပဲ လက်ဝါးရိုက်ပြီးသား လူတွေကိုပဲ အောက်ဈေးနဲ့ပေးလိုက်တာပါ။ ၀ယ်ယူရေးကြတော့ ပြောင်းပြန်လေ သွင်းမဲ့လူကို အနိမ့်ဆုံးဈေးနဲ့ကြိုစစ်ပြီးသား ပြီးမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုတာကို အတုလုပ်ပြီး ကိုယ့်လူပါအောင်ထဲ့လိုက်တာ၊ အပေါ်ကလူတွေက နှာစေးနေတယ်လေ။ Supplier က ဈေးအပေါဆုံး နဲ့ သွင်းရမျာဆိုတော့ အပြင်မှာသုံးမရတဲ့ဟာတွေ၊ အရည်အသွေးမမှီတဲ့ဟာတွေပဲ သွင်းတော့တယ်။ အဲသည်တော့ ထုတ်လိုက်တဲ့ Product တွေက ဈေးကွက်မှာ ၀ယ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူး။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တဲ့ ဘယ်ပစ်စည်းကို အပြင်မှာ ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရာတွေ့ ဖူးလဲ။ QQ cherry ကားကလဲ ဈေးကြီးတော့ ဘယ်သူမှ မ၀ယ်ချင်ကြတော့ဘူးလေ၊ မူရင်းနိုင်ငံမှာ ဈေးအပေါဆုံးကားကို သည်မှာ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရမှာ စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာစရိတ်တွေထပ်ပေါင်းထားလို့လဲ သေချာစစ်သင့်ပါတယ်။ အရည်သွေးကောင်းကို ဈေးချိုချိုနနဲ့ သုံးစွဲနိုင်ကြပါစေ။
Reply	စိုင်းမူဆယ် November 15, 2012 - 11:03 pm	ကာကွယ်ရေးဌာနကောဘယ်လောက်ဝါးပြီးစားထားတာဘာလို့မဖော်ပြတာလဲ
Reply	Aung Kyaw Nyunt November 16, 2012 - 9:53 am	As the first comment, there are much more corruptive actions and corrupted volumes in the Government Departments. It is really miserable for us to realize such actions vividly. Corrupted money in the past can comfortably be utilized to build the country toalevel not lower than ASEAN countries.
Prompt action to be taken to remedy the situation is as follows:
Professional Engineers Organization, normally known as Board of Engineers under the auspices of Myanmar Engineers Society, MES, should be established soonest possible. They should be given proper authority to monitor all design and construction works carried out by The Government as well as The Private Companies.
All of the construction works presently carried out by The Government Departments, GD, with corruptive plans should be tendered to the private design consultants and construction firms which will be supervised and monitored by The GD and The Consultants jointly. In this way, quality will be properly controlled and corruption will be checked. Any weakness of the works will be responsible and accountable by the design and construction firms who can be charged of any fraud or misconducts. At present, we have never heard any significant action taken on the corruptive public organizations. They always tried to cover up each other.
Reply	win November 16, 2012 - 10:58 am	very good. goahead.
Reply	ရာဇာ November 16, 2012 - 3:01 pm	သေသေချာချာ လဲစဉ်းစားပြီး မှ လုပ်ကြပါ ဆရာတို့ ရယ်…..စကားနောက် တရားပါ ဆိုသလို…တော်ကြာ တရားရုံး ရောက်မှ တရားလို လဲ ကိုယ်ဘဲ…တရားခံ လဲ ကိုယ်ဘဲ ဖြစ်နေအုံးမယ်…..
Reply	mg mg November 16, 2012 - 3:51 pm	တခုခုတော့မှားနေပြီနဲ့တူတယ်..အလွှဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်ဆိုတာမှားနေတယ်နဲ့တူတယ်
ဂ.ဃ.န.ဏ သေချာသိအောင်လုပ်ကြပြီးမှ တင်ကြပါဗျာ..အကြွေးရဖို့ကျန်တာနဲ့ အလွှဲသုံး
Reply	ml November 16, 2012 - 6:21 pm	ငွေပြန်လျော်လို့ပြီးရင်ထပ်ခိုးလိမ့်မည်
Reply	မောင်မောင်ကျော်ဝင်း November 24, 2012 - 3:27 am	စားလို့ဝါးလို့ဝပြီးအငြိမ်းစားယူသွားကြကုန်သောဉပဒေအထက်
Reply	james November 29, 2012 - 11:53 am	လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အကြံတော့ပြုချင်ပါတယ်
၀န်ထမ်းဆိုတာ ခေတ်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း လုပ်ခဲ့ကြရတယ်၊ ၀န်ထမ်းတိုင်း လာဘ်စားတဲ့နေရာကလူမဟုတ်ရင် စားလို့ လဲမရဘူး၊ ကိုယ်မစားရင် ကြောက်စရာလဲမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အကျင့်ပျက်ခြစားတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး မကြာခဏ မသုံးစေချင်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကလဲ တိုင်းပြည်လူကြီးတွေ အသုံးမကျလို့ဝန်ထမ်းမလုပ်ချင်သလိုလိုနဲ့ကိုယ့်စီးပွားရေးပဲလုပ်ကြပြီး အခုမှ အော်လို့ ရတဲ့နေရာရောက်မှ အော်နေကြတာ၊ ရှက်တတ်ရင် ရှက်စရာပါ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး မညံ့ကြသလို အားလုံးလဲ မတော်ကြပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်တော်တယ်ထင်နေရင်မှားလိမ့်မယ်၊ ပြည်သူက အလကားကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ အချိန်တန်ရင် ခင်ဗျားတို့သောက်ချိုးတွေပေါ်ကုန်မယ်၊ ၀န်ထမ်းတိုင်း မကောင်းသလို ၀န်ထမ်းတိုင်း ခြမစားပါဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ ရော နိုင်ငံတကာ လွှတ်တော်ရဲ့အရည်အချင်းမီကြလို့ လား၊ ၀န်ထမ်းကို အရေုးယူမှာ စိုးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ၀န်ထမ်းမှားရင် ၀န်ထမ်းကို အရေးယူရမှာပဲ၊ ဒီလိုပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဘယ်လိုအရေးယူကြမလဲ၊ တင်ပြမှုအရည်အသွေးညံ့ရင်လား။ စကားပြောညံ့ရင်လား၊ ….
Reply	Salai Lian December 17, 2012 - 11:26 pm	How about the lands and properties confiscated illegally by the generals and given away to their own sons, daughter and wives? Every corner of Burma is so smelly because the generals urinate our beautiful land. Khothu mashiet myinthu shiet. If the government is composed with thieves and robbers, how will the Union be built? Ministries are run by thieves, and Naypidaw is captital of Thieves and Robbers.
Reply	yawna December 20, 2012 - 9:44 am	ကျုပ်တို့ မှာတော့ အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆောင်လိုက်ရတဲ့ အခွန် ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ လုပ်ထားတာ လေးတွေ အခွန်ဆောင်ဘို့ အဆင်မပြေသူတွေ မိသားစုအကြောင်းတခုခုရှိရင်တောင် မပြန်နိုင်တဲ့ဘဝ ဒင်းတို့ ကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခိုးနေတာဘာလို့ ဖမ်းဆီးပြီးအရေးမယူတာလဲ ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိရဘူးဆို သတင်းထဲထည့်ရင် ပြည်သူတွေသိမှာ စိုးတာ ဒါလားနိုင်ငံတော်လျှိ့ ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု မသမာမှု ခိုးတဲ့အမှုကို နိုင်ငံတော်လျှိ့ ဝှက်ချက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ထပ်ခိုးကြဦးမလို့ လား